Sahaminta CLIMMAR: 80% ka ganacsada mashiinada beeraha Yurub waxay dareemayaan saameynta cudurka faafa - Nidaamka Baradhada
Sahan ay sameeyeen Ururka Ganacsadeyaasha Reer Yurub ee CLIMMAR waxay muujinayaan in ku dhawaad ​​80% shirkadaha ku takhasusay iibinta mashiinada beeraha iyo qalabka ay la kulmayaan saameynta xun ee masiibada. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ayaa lagu xusay qaybta iibinta qalabka cusub. Isla mar ahaantaana, ugu yaraan 70% kaqeybgaleyaasha ayaa rumeysan in labada bilood ee soo socota ay xaaladdu ka sii dari doonto.
Isku soo wada duuboo, ugu yaraan 660 ganacsato oo ka kala socda 14 dal ayaa ka qeybqaatay sahanka. Daraasadu waxay muujineysaa in saamaynta dhibaatada COVID-19 ay si xoogan u dareemayaan shirkadaha ka ganacsada iyo kuwa wax u qeybiya qeybta mashiinada beeraha ee Yurub iyo qeybta qalabka. Qiyaastii 80% jawaabeyaasha waxay la kulmaan cawaaqib "aad u daran". Waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin ka jira qaybta iibinta gawaarida la adeegsaday, laakiin illaa xad ka yar marka loo eego iibinta gawaarida cusub.
Cawaaqib xumada ka dhalan karta xiisadaha xarumaha adeegga waa yar yihiin. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay xaqiiqda ah in shaqada guga oo dhan la qabtay. Iyadoo la raacayo, xarumaha waxay heleen amarro ku saabsan dayactirka iyo dayactirka mashiinnada ku lugta leh.
Guud ahaan, ilaa 45% shirkadaha wax iibiya ayaa sheegaya inay u badan tahay inay u baahdaan taageero maaliyadeed si ay uga badbaadaan dhibaatada. Isla mar ahaantaana, 13% shirkadaha waxay si cad u muujinayaan inaysan u baahnayn tallaabooyin kaalmo ah ayna sameyn karaan iyaga la'aantood.
Markii la waydiiyey nooca talaabooyinka gargaarka ee loo baahan yahay, shirkadaha badankood waxay ku jawaabeen inay jeclaan lahaayeen inay helaan amaah bangi iyadoo la raacayo shuruudaha la aqbali karo, iyo sidoo kale taageero laga helo warshadaha mashiinka sameeya.
Ujeedada bilaha soo socda waa rajo xumo. In kabadan 70% shirkadaha ayaa sheegay inay filayaan hoos udhaca baahida loo qabo wax soo saarkooda, iyo ilaa 16% shirkadaha waxay aaminsan yihiin in hoos udhaca ay dhici doonaan in kabadan 25%.
Sida laga soo xigtay adeegga saxaafadda ee CLIMMAR
Tags: ganacsatada makiinadaha beerahacoronaviruscawaaqibka dhibaatada